काठमाण्डौबाट आयो यस्तो डरलाग्दो खबर पक्राउ परेका २ डनहरूले गर्थे यस्तो काम! – PathivaraOnline
Home > समाचार > काठमाण्डौबाट आयो यस्तो डरलाग्दो खबर पक्राउ परेका २ डनहरूले गर्थे यस्तो काम!
रकम असुली र गुण्डागर्दी गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ घर भएका मिलन जोशी र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका घर भएका रविन्द्र बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको अ’पराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङले बताए ।
मंसिर १६ मा जोशी र बस्नेतले मेनपावर सञ्चालक पत्नी र कर्मचारीलाई कमिशन नदिएको भन्दै हा’तपा’त गरेका थिए ।उनीहरुलाई मित्रपार्कबाट पक्राउ गरेर आ’परा’धिक लाभ लिएको कसुरमा थप अनुसन्धान र कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको एसएसपी खापुङले बताए ।
आफ्नै सालीसँग शारी’रिक सम्बन्ध राख्दा राख्दै श्रीमतिले भेटेपछिि… (भिडियो हेर्नुहोस)